Kulesi sihloko sizobuka izici zobuchwepheshe ze-Nissan X-Trail, izici zalo moto, ukusebenza kwayo okuphezulu ezindaweni eziningi. Kumele kuqashelwe ukuthi lo mshini wadedelwa ngokuguqulwa eziningana. Yiqiniso, yonke imodeli eyaphuma ngemva kwesikhathi esedlule yayingcono, ephelele futhi enhle kunaye ngaphambili. Kodwa-ke, kunezici ezithile zobuchwepheshe ezijwayelekile ze-Nissan X-Trail, ngenxa yokuthi abathengi banamuhla bathanda le modeli ethile kwezinye izilinganiso eziningi, ngisho noma zingaphezu konyaka ubudala.
Injini nezinye izingxenye zesistimu eqhuba imoto
Le SUV ingenye yezindinganiso zefomethi ye-4 x 4, okuyinto ekahle kokubili ukuhamba emadolobheni nokuhamba ibanga elide ezindaweni eziyingozi nezinzima. Ngokuvamile kuthiwa imoto eneyindilinga, egcwele, okubukeziwe. Injini ye-Nissan X-Trail iyisistimu yephethiloli engu-2 litre, amandla avela ku-141 kuya ku-173 wamahhashi (kuye ngokuthi unyaka wokukhiqiza). Uhlelo olusebenzayo lungaba ukuhanjiswa okuqhubekayo kwe-CVT, noma okuzenzakalelayo okuzenzakalelayo noma ngisho nomshini. Ngendlela, uma uthenga imoto esetshenzisiwe, ukushintshwa kwe-variator kuyo ngeke kube kubi kakhulu. Ngakho-ke, ungakwazi ukushayela imoto ngendlela oyithandayo.
Indlu enhle futhi ekhululekile kakhulu
Akunakwenzeka ukukhuluma ngezici zobuchwepheshe ze-Nissan X-Trail, engekho salon yale moto. Wonke ama-sofas aseqedile ngempahla ephezulu, angakwazi ukuhlala nabantu abadala abangaphezulu kuka-6 kule salon. Umkhathi ukhululekile kangangokuthi umuzwa wokuzihlanganisa nokuqina awudalwanga, ngisho noma zonke izihlalo zihlala. Igumbi lezimpahla liphethe amazinga amabili nendawo yokulayisha indawo. Ngenxa yalokhu, kulula ngisho futhi engabizi kakhulu ukupakisha imoto nokuthutha izinto ezihlukahlukene kuyo. Uma uphahla izihlalo ezingemuva, khona-ke umthamo we-trunk uzoba yi-1773 amalitha. Futhi, i-sofas yangemuva ingahlanganiswa emgqeni owodwa, futhi ungakha ukuze u-2: 1: 2 ube namandla nokududuzeka okukhulu.
Ukuphelela kwemoto ngezandla zomuntu siqu
Imoto ye-Nissan X-Trail, izici zobuchwephesha ezitholakala kuwo wonke umuntu futhi ezamukelekayo cishe kuwo wonke umshayeli, nazo zivumela kalula umsebenzi wokulungisa. Inzuzo eyinhloko yomshini kungenzeka ukuthi ufake ukukhwabanisa emgwaqeni, okuthuthukisa umbono womgwaqo womgibeli futhi wenze imoto yangaphakathi ilula, i-airy futhi ihle. I-amenable kalula ekushintsheni okuhlukahlukene kwesistimu ehambayo nokunciphisa. Yiqiniso, emotweni ungakwazi ukufaka noma yikuphi, ngisho ne-stereos eyinkimbinkimbi kakhulu, ukuhamba, kanye nezesekeli nemininingwane eyenza uzwela.
Cindezela ijubane elikhulu
Ngokwesilinganiso, zonke izinhlobo ze-crossover, ezakhiwe phakathi neminyaka embalwa edlule, zinezibalo ezihamba phambili ukusuka ku-180 kuya ku-200 km / h. Imininingwane ye- Nissan X-Trail ikuvumela ukuba ubeke lo mshini njengenjini ye-essence, ne-diesel. Esikhathini sokuqala, imoto isebenza ngokugcwele kuphethiloli A-95, okwesibili kuyodingeka ukuba ihambise nefuthe elifanele, elitholakala kuwo wonke ama-refuellings.
I-Snowmobile "Stealth-Ermak" nezici zayo
Ukufakwa kwesihlungi se-salon "Nissan Kashkay", isithombe
Ungakhetha kanjani amathayi ehlobo we-SUV?
Ukubuyekeza: ifilimu "Triangle" (2009). Nabalingisi indima ifilimu "Triangle"
Indlela yokuqoqa i-pike caviar ngokwakho
Izidakamizwa "clonazepam": yokusetshenziswa
Lezi zikhwama ezifashisayo nezisebenzayo. Indlela yokubopha isikhafu
Yini upende angethula izinwele zakho ngaphandle yellowing? Kuhle siphungule izinwele wemvelo ngaphandle yellowness (ukubuyekezwa)
Izaqathi Canada F1: ukubuyekezwa, izincazelo, namathiphu ezikhulayo
Kuqondile ibhalansi ukuhlaziywa - Ngokwesibonelo, izici ukuhlaziywa mpo, mpo ukuhlaziywa ukulinganisela nobunzima zifinyelele eziphethweni esele